Ahịa Ahịa Apple ọ na-ara? | Martech Zone
Thursday, May 28, 2009 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Onye na-ere ahịa na-emeri ebe a, Apple ma ọ bụ Microsoft? Pịa site ma ọ bụrụ na ịhụghị vidiyo ahụ.
Ederede a sitere na mkparịta ụka m sonyere na ya Microsoft na-enweta ala ụfọdụ megide Apple. Mkparịta ụka ahụ gara n'ihu na Twitter na nnukwu tweet si Kara:
site karaweber: @douglaskarr nwere ọ postụ na post taa. Snarky apụọ, na mkpọsa “Abụ m Mac” bidoro ịgụ dị ka snarky. (FTR, Abụ m onye ofufe Apple, kwa).
Enwere m olileanya na nke a na-akpata nnukwu arụmụka. A na-ahụta Apple dịka otu n'ime ndị ahịa ahịa kachasị mma na teknụzụ taa, mana m na-amalite inwe echiche nke abụọ gbasara mbọ ha. Marketingre ahịa ọ rụrụ oke ọrụ na mmeri Apple na nso nso a? Ma ọ bụ na ọ bụ naanị ego efu? Biko agwakọtala ngwaahịa na ahịa na nke a - achọpụtara m na iPhone bụ onye na-agbanwe egwuregwu na ụlọ ọrụ ahụ. Ajuju m abughi ma Apple nwere oke ahia, ma o nweghi mmetụta ka ahia nwere na nnukwu ahia Apple?
Ọ bụ ahịa Apple n'ezie mere ihe dị iche?
Mgbe oge siri ike ma nwee ike ịnweta ego, ndị ahịa na azụmaahịa ga-eme mkpebi ịzụta ihe siri ike karị. Ebe ọ bụ na Microsoft na-emeri azụ ahịa ahịa site na Apple na ihe dịka laptọọpụ, ọ dị ka Microsoft na-emeri ya uru agha. Nke ahụ bụ, Apple si ahịa nke dị jụụ, mara imewe, ala nke iji, na obere nsogbu… na-adịghị arụ ọrụ.
Nke ahụ pụtara na ndị ahịa nwere ọgụgụ isi ekwenyeghị na ọnụ ahịa Apple ga-aba uru ọ bụla. Apple anaghị eme ka okwu ahụ… na ekwenyeghị m (ma ọ bụ Kara) na azụmahịa ndị mara mma na-enyere ha aka. N'ezie, echere m na ha nwere ike ịda ụda dịka ụfọdụ ụmụaka emebighị emebi na-etu ọnụ maka ihe egwuregwu kachasị ọhụrụ ha ma nye mkpịsị aka aka ntọala (nke ahụ bụ mụ na gị).
O nwere ike ịbụ oge igbu niile Mac vs. PC mkpọsa.
Otu ihe dị mkpa na nnukwu ahịa bụ oge. Ọ dị mkpa na ahịa gị dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị… yana mgbanwe na akụ na ụba na-emetụta mkpebi mkpebi ndị mmadụ. N'ihi ya, ọ bụ igodo iji mezie ya. Oge eruola ka Apple gbanwee.
Tags: apụlapụl ahịa
Mee 28, 2009 na 9: 38 AM
Echere m na paragraf ikpeazụ gị na-akọwa ihe kpatara Apple ji atụfu òkè ahịa. Echiche ndị ahịa agbanweela nke ukwuu n'ime afọ gara aga ma ọ bụ karịa na Apple agbanwebeghị atụmatụ ahịa ha. Microsoft nwere, mgbasa ozi laptọọpụ na-erughị $1500 na-aga kpọmkwem n'obi nke ndị na-azụ ahịa maara ọnụ ahịa.
Mee 28, 2009 na 11: 55 AM
Tinye nke ọma! Mgbasa ozi Apple adịchaghị njọ. Ahụtụbeghị m ha n'anya ma enweghị m ike itinye mkpịsị aka m na ihe kpatara ya, na ọ bụ snark n'ezie.
Mee 28, 2009 na 12: 16 PM
Echere m na ha bụ, na kemgbe oge ụfọdụ, na-ere ahịa na ọkwa ụfọdụ. Maka ndị na-achọghị iji igwe ha na-eme tinker ma ọlị (ma ọ bụghị m), ahịa ha dị irè ebe ọ na-anwa igosi otú ha dị mfe. Mgbasa ozi ha na-akwalite “Geniuses” anaghị eme m ihe ọ bụla, achọghị m n'ezie, enweghịkwa m ike ịbanye n'ụlọ ahịa juru eju n'oge awa azụmaahịa nkịtị, mana enwere m ike ịchọ ịntanetị iji nweta enyemaka site na 90%+ ahịa PC. ndị ọrụ. Mgbasa mgbasa ozi ha "Elimination" na-agbalị ịgwa m na ọ bụ naanị otu nhọrọ dị mma, ma mgbe m zụtara laptọọpụ ọhụrụ m, Mac gafere n'ihi na ha enweghị ezigbo atụmatụ m chọrọ, mana enwere m ike ịchọta PC ziri ezi. nke ahụ nwere ihe niile m chọrọ.
Mee 28, 2009 na 2: 02 PM
A bụ m onye na-akwado jabs aghụghọ emere na usoro abụọ mbụ nke Mac na-agbakwụnye. Mana echere m na ha were mgbanwe na-adịghị mma ihe dị ka ọnwa 9 gara aga, ihe dị ka oge “Vista bashing” malitere. Kemgbe ahụ, echiche m gbasara mgbasa ozi ha ajụla nke ọma.
Maka m, mgbasa ozi ndị na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ ka mma nke ime ka ndị ọrụ Mac dị ugbu a nwee mmetụta dị elu banyere nhọrọ ha karịa ka ọ na-eme ka ndị ọrụ ọhụrụ banye n'ogige ahụ. Jiri nwayọọ (na ihe ọchị) gosi uru ngwaahịa gị na ndị mmadụ ga-abịa n'akụkụ gị. Na-akparị asọmpi ahụ, na n'ụzọ na-apụtaghị ìhè ndị na-eji ya eme ihe, na ị nwere ike ịwepụ na isi ike ọjụjụ ọbụna tụlee mgbanwe.
Ejighị m n'aka ka mgbasa ozi Laptọọpụ Hunter Microsoft siri dị irè, mana ha na-egosipụta opekata mpe ọnụ ahịa na uru dị iche iche nke kọmputa dabere na Windows. Mụ onwe m, achọrọ m MacBook Pro $2,800 17 ″, mana azụrụ m netbook dabere na Windows $325. The netbook bụ zuru ezu megidere nke MacBook Pro, ma price dị iche mere ka m chegharịa ihe dị mkpa vs. ihe ga-adị mma n'ezie inwe.
Apple ga-enwe onye na-anụ ọkụ n'obi teknụzụ na-eguzosi ike n'ihe mgbe niile, na mgbakwunye, a ga-enwe ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ karịa maka iji ya dị ukwuu. Mana akụ na ụba dị ugbu a na-amanye ọtụtụ ndị mmadụ ime mkpebi dabere naanị na ọnụ ahịa dị n'ihu, nke ahụ abụbeghịkwa mpaghara ahịa ebe Apple na-ele anya ịsọ mpi. Na mgbasa ozi ha ugbu a anaghị eme ka ọnọdụ a dịkwuo mma, ma ọ dị mma ma ọ bụ njọ.
Mee 28, 2009 na 7: 40 PM
N'oge gara aga, anụrụ m Merlin Mann na-ekwu na ọ bụrụ na ịzụrụ Apple abaghị uru ego ahụ, mgbe ahụ ọ baghị uru ego ahụ-nke m kwenyere.
Nkpughe: Ana m eji Mac na-arụ ọrụ yana igwe Windows n'ụlọ.
Mee 28, 2009 na 11: 45 PM
Echere m na ị na-agbagwoju anya marketing na mgbasa ozi.
Ịre ahịa Apple kemgbe nloghachi nke Ọrụ abụrụla nke ọma n'enweghị mgbagha ebe mgbasa ozi na mkpọsa n'otu n'otu na-ada mgbe ụfọdụ.
Ekwenyere m na arụmụka na nnukwu ihe ịga nke ọma Apple na-adịbeghị anya bụ n'ihi ahịa bụ nnọọ ụgha. Isi nkuku nke atụmatụ Apple na-emepụta ngwaahịa dị mma, ọ bụghị nnukwu ahịa.
iPod bụ nnukwu ihe ịga nke ọma ọ bụghị n'ihi mgbasa ozi silhouette na-agba egwu, mana n'ihi na ọ bụ / bụ ngwaahịa dị egwu nke dị / dị elu ma dị elu karịa ihe ọ bụla ọzọ na ahịa.
N'agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba, ndị na-azụ ahịa ga-akwụ ụgwọ mgbe niile maka nnukwu ngwaahịa. E hiwere Apple na nlaazu ego ma na-aga n'ihu na-eme nke ọma na nlaazu a.
Nzọrọ na Microsoft na-enweta òkè-ahịa na Apple nwere ike bụrụ nke akabeghị aka. Nke akụkọ na m hụrụ ka ọ na-ekwu na-abụghị.
Mee 29, 2009 na 12: 31 AM
N'agbanyeghị na m kwuru banyere mgbasa ozi, m ka na-ajụ ahịa ahịa, ọ bụghị mgbasa ozi. Anaghị m ajụ ngwaahịa ndị dị ịtụnanya. Ana m aza okwu a site na Ipod na laptọọpụ m nke nhọrọ bụ MacBookPro m. Ajuju m bu kedu ibu ka uzo ahia ahia Apple nwere na oganihu ha? Ọ bụ naanị akụ na ụba ka ha keere òkè?
Mee 29, 2009 na 8: 51 AM
Enwere m mmasị na mkparịta ụka a. Daalụ maka ibido ya. N'uche nke m, Apple nwere ma na-aga n'ihu na-enwe ọmarịcha ahịa. Ụlọ ọrụ ahụ anọgidewo na-enwe ọganihu site n'ọtụtụ ọdịda, ọtụtụ n'ime akụkụ n'ihi ịzụ ahịa ahịa ha na ikike ịhazigharị na dime. Mgbasa ozi mgbasa ozi ugbu a bụ naanị otu akụkụ nke atụmatụ a, nke m chere na ọtụtụ n'ime nkwupụta na-elekwasị anya na ntakịrị oke. Echere m na ntụaka maka mgbasa ozi ahụ na mmalite na-etinye ndị mmadụ na egwu ahụ. Ka o sina dị, atụmatụ ịzụ ahịa Apple gụnyere ihe karịrị otu mgbasa ozi ụzọ. Atụmatụ ngwaahịa, ọnụahịa, nhazi, imewe, na oge emechara site na mgbasa ozi ezubere iche, pr, ihe omume, na usoro ahịa ahịa ndị ọzọ kpọmkwem na nke na-apụtaghị ìhè ga-edobe ụlọ ọrụ a n'ihu n'ihu mkparịta ụka ahịa ruo ogologo oge.
Jun 3, 2009 na 3:56 nke ụtụtụ
Ndewo Douglas, ndo ịhapụ ikwu okwu na-abụghị isiokwu, mana ọ dị ka njikọ mbụ, nke na-ekwu ka ịpịa tụbara ịhụ vidiyo, na-ejikọta na vidiyo na-eduga na ibe 404, "Anyị enweghị ike ịhụ nke ahụ! Ma ị furu efu ma ọ bụ na anyị nọ!". Ọzọ… gbaghara m maka ikwu okwu na-abụghị isiokwu.